Global Voices teny Malagasy · 22 Mey 2018
22 Mey 2018
Tantara tamin'ny 22 Mey 2018
Blogenyo, Tantara An-tsary Ety Anaty Tranonkala, Momba ny Tontolom-bilaogy Filipiàna
Azia Atsinanana22 Mey 2018
Manolotra blaogy tantara an-tsary ety anaty tranonkala vao natombony i Tonyo Cruz izay mirotsaka ao amin'ny tontolom-bolongana Filipina. Mitady ny haniratsira ireo zava-nitranga, zava-miseho, adihevitra, sy olana ilay tantara an-tsaryBlogenyo vao natomboka vao haingana io ary malaza eny anivon'ireo blaogera Filipina.
Portiogaly: Fiombonana ho fanomezam-boninahitra an'i Jose Saramago, mpandresy tamin'ny loka Nobel
Eoropa Andrefana22 Mey 2018
Maty teo amin'ny faha-87 taonany ilay mpanoratra Portiogey sady hany mpandresy tamin'ny loka Nobel amn'ny teny Portiogey ho an'ny Literatiora, José Saramago, tao amin'ny toeram-ponenany tao Lanzarote. Na dia mety tsy ho tiany aza izany dia nahazo fanomezam-boninahitra iombonana tao amin'ny Twitter izy.
Tontolo Arabo: nomena voninahitra tamin'ny alàlan'ny Google Doodle sy Twitter i Ibn Khaldoun
Heverina ho toy ny mpanoratra sady mpahay tantara Arabo lehibe indrindra, teraka tamin'ny taona 1332 tany amin'ilay antsoina ankehitriny hoe Tonizia ilay filôzôfa Ibn Khaldoun. Fantatra amin'ny maha rain'ny tantaran'ny kolontsaina sy ny siansa ara-tsosialy maoderina azy ihany koa izy.